जिदान : मड्रिडले रोनाल्डोको स्थान बदल्न सक्दैन !! के रोनाल्डो बेच्नु रियलका निम्ति दुर्भाग्य हो ?? - Experience Best News from Nepal
स्पेन क्लब रियल मड्रिडले क्रिस्टियानो रोनाल्डोको क्लब निस्कासन पश्चात कुनै खेलाडी रोनाल्डो स्तरको सम्झौता गर्न नसकेको देखाउछ, रेकर्ड धारी क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई कोही खेलाडीले रियालमा बदल्न नसक्ने दावी गरेका छन् ।
ला लिगामा हाल मड्रिडले लेगानेस विरुद्धको खेल बाकी हुदा आफ्नो प्रतिद्वन्दी मान्दै आइरहेको क्लब बार्सिलोनाको भन्दा १४ अंकले पछाडी रहेको छ, जुन मड्रिडको सबै भन्दा तितो अनुभव हो । लगभग टाइटल जित्ने रियलको एक सपना नै बनिसकेको छ । त्यस बाबजुत पनि रियल यूएफा च्याम्पियन लिग, कोपा डेल रे बाट समेत बाहिरिसकेको छ । यस सिजन रियलका निम्ति क्लब वोर्ल्ड कप बाहेक अन्य टाइटलबाट बाहिरिएको भन्दा फरक नपर्ला । आखिर सिजनको अन्तसम्म पनि स्टार रोनाल्डोको स्थान भर्न कुनै खेलाडी सम्झौता गर्न भने सकेन, जिदान उक्त विषयलाई लिदै क्लबको ठुलो दुर्भाग्य भएको संकेत देखाउछन ।
मार्साको खबरमा छापिएको थियो – जिदान भन्दै थिए, जे गर जसलाई क्लबमा ल्याउ तर रोनाल्डोको स्थानको भर्पाइ हुन्न । रोनाल्डो गए तर उनको स्तरको खेलाडी रियलले भित्र्याउन र बनाउन सक्दैन । रोनाल्डो विना करिम बेन्जिमाले यस सिजन रियलका निम्ति सर्वाधिक गोल गरे, पूर्ण खेलमा २६ गोल । जिदान भन्छन – बेन्जिमा उत्कृस्ट ९ नम्बर होइनन् तर एक आक्रमक मिडफिल्डर हुन् ।
एक प्रश्न हरेक खेलमा उठ्ने गर्छ,
के रोनाल्डो बेच्नु रियलका निम्ति दुर्भाग्य हो ??
हाजार्डको इच्छा मड्रिडमा नयाँ रोनाल्डो बन्ने